Famindrana any amin'ny seranam-piaramanidina Madrid fivarotana seranana minibus Barajas vip
Famindrana any amin'ny seranam-piaramanidina Madrid transfere transfere | fiaramanidina shuttle
Mitady ny serivisy famindrana serivisy tsara indrindra ho any Madrid ve ianao?
Eny e, faly ianao nahita izany! ao amin'ny pejin'ny Transfer Airport Madrid Barajas mankany amin'ny foibe; Manana ny mifaninana kokoa ny vidiny, ka afaka manakarama; fiara manankarena amin'ny mpamily, VIP minivan, minibus na bus ho an'ny seranan-tsambo handefasana anao any amin'ny hotely; Ho famaranana; Izany dia nataon'ilay orinasa Torres Bus.
Nentinay ny 50 taona maro, ho an'ny mpanjifa, dia toy izany no manao famindrana avy amin'ny seranam-piaramanidina ao Madrid fotoana; Noho izany, na avy ao amin'ny foibe, (Piazza Espaina, Hortaleza, Las Rozas, Majadahonada, Pozuelo de Alarcón, Getafe, Leganes, Mostoles, Alcorcon, Pinto, Parla, Ciempozuelos, Arganda, Alcalá de Henares, San Fernando de Henares, Torrejón ny Ardoz, sns)
Raha ny marina iray amin'ireo toerana fifandraisana lehibe na fiarandalamby na ny rivotra, toy ny ankehitriny ny seranam-piaramanidina Madrid Adolfo Suarez (T1, T2, T3 na T4), na koa ny fiantsonan'ny Atocha Ave, Renfe na amin'ny toby. Ankehitriny dia afaka mangataka ny notsongaina ho an'ny fanompoana rehetra ilainao.
Fiarandalamby madinidinika any Madrid
TOKONY HISARAKA HAHATAKIKA SY HANANA ANAO AMIN'IZAO TONTOLO IREO MOMBA NY MIRALENTA EO AMIN'NY SORATRA MOMBA NY FANATANTERAHANA
[md-tsoratra famantarana = "Tratamineto" voafaritra = "eny"]
[md-tsoratra famantarana = "anarana" voafaritra = "1"]
[md-tsoratra famantarana = "Famaritana anarana" asongadina = "1"]
[md-tsoratra famantarana = "Telefona" fanampiana = "Azafady, manome laharana an-tariby hifandray anao" voasoritra = "eny"]
[md-tsoratra famantarana = "Seats / Seats" fanampiana = "Azafady manome toerana maro, ohatra: 25" voasoritra = "eny"]
[md-tsoratra famantarana = "mailaka" fanampiana = "mampiditra mailaka marina" voafintina = "eny"]
[md-tsoratra famantarana = "tonga ny andro" voafaritra = "1"]
[md-tsoratra famantarana = "Tonga ny ora" fanampiana = "Fenoy ity saha ity raha toa ka tonga ianao Tren"outlined =" 1 "]
[md-checkbox label = "Extras"]
Toby Baby mpanandratra Vondrona lehibe Ny mpamily miteny anglisy WIFI
[md-tsoratra famantarana = "toerana fisafidianana" voasoritra = "1"]
[Md-text marika = "Flight isa na lamasinina" fanampiana = "Ampidiro ny NUMBER 'izany hoe misidina OR lamasinina NY condcutor Monitore ny sidina" voalaza = "1"]
[Md-text marika = "Destination" fanampiana = "Ohatra: Plaza de Espaina, 7, 28008, Madrid" 289 voalaza = "1"]
[md-tsoratra famantarana = "Fanangonana" fanampiana = "Ex: Cuesta de san vicente, 28008, Madrid" 289 naseho = "1"]
[md-tsoratra famantarana = "andro famoriam-bola" voasoritra = "1"]
[md-tsoratra famantarana = "Fotoam-pamokarana" voafaritra = "1"]
[md-textarea label = "MESSAGE"]
[Md-rakitra marika = "Alefaso ny rakitra" fanampiana = "amin'io sehatra io dia natao ho an'ny mpampiasa izay te-hanaiky ny enconcreto lalana faritany haleha izy ireo nanohana ny endrika manaraka ireto: fanononana, docx, pdf, ppt, pptx, jpg, JPEG , PNG "]
Azonao atao ihany koa ny mamaha ny olana rehetra anananao Madrid transfer transferNa ho ny terminal in T1 - T2 - T3 - T4 na T4S, na ao amin'ny Atocha Train Station Ave na toerana hafa na ny hevitra ao amin'ny vondrom-piarahamonina ao Madrid.
ny minibus rentals, Lasa nalaza be izy ireo, ho fomba mahomby sy ara-toekarena amin'ny fitaterana vondron'olona lehibe kokoa sy ny entany ary ny entana. Noho izany dia manofa a private minibusny Madrid transfer transfer Amin'izany fomba izany, avelao ny mpandeha rehetra hiara-hiaina, amim-pilaminana ary amim-piraisan-kina.
Raha mitady fiarandalamby amin'ny seranam-piaramanidina ao Madrid miaraka amin'ny mpamily iray ianao, dia afaka mahazo tsara 7 olona minibus, na hatramin'ny mpandeha 16; Afaka mametraka ny bus amin'ny seranam-piaramanidina ao Madrid, na amin'ny lafiny iray hafa; Mila fiaramanidina Vans na Combis ianao, amin'ny fomba iray na fomba iray làlan-dàlana, dia eo amin'ny toerana mety ianao; Noho izany antony izany, misafidiana iray amin'ny tolotra tsara indrindra, ao fanofana fiaramanidina fiaramanidina na bisy.
Mila fiara madinika amin'ny fiaramanidina ve ianao any Madrid?
Raha eny, antsoy anay sy ny famandrihana an-tserasera, noho izany antony izany dia ho faly hanampy anao ianao ary hanoro anao ny karazam-pitrandrahana madinika izay mifanaraka amin'ny tena ilainao.
Manontany tena ve ianao hoe aiza no azoko anofana minibus? Manam-bintana ianao, tsy mitady intsony, ao Towers bus, manana antoka ianao.
Inona no lanjan'ny vidin'ny fiara fitaterana madinika ho an'ny fifindra-monina any Madrid? Ny saran'ny fifindrana any Madrid dia eo anelanelan'ny 55 € sy 240 €, arakaraka ny karazana fiara ilainao; Ary inona no fiaramanidina tsara indrindra ho an'ireo olona 12? Ny kamiao tsara indrindra na micro izay misy amin'izao fotoana izao hanao famindrana serivisy; Ny Mercedes Sprinter micro, noho ny fahaizany mitondra ny olona 19 sy ny entany.
Raha fintinina, tsara, aza manahy, Torres Bus dia hanampy anao mba hahazoana ny fifaninanana tsara indrindra ho an'ny fikarakarana fiaramanidina tsara indrindra anao.
Noho izany antony izany, na aiza na aiza toerana misy anao, na ny haben'ny vondrona misy anao, dia manakarena Buses sy minibus Torres Bus, dia ho faly hanampy anao, hifidy minibus na mpandeha an-tongotra, ho an'ny transfer Madrid Airport, Amin'izany fomba izany, dia mifanaraka amin'ny filànao sy ny teti-bolao.
Noho izany, jereo ny soso-kevitrao fanofana mpanazatra ary minibuses eto, ary manamboatra ny minisiteran'ny mpandeha ao amin'ny seranam-piaramanidin'i Madrid, manana safidy maro samihafa isika; Raha ny marina, anisan'izany ny fanofana fiarandalamby Mercedes, ny famandrihana microbuses, azo alaina amin'ny GPS na trano fisakafoanana minivana, azo raisina any amin'ny toerana rehetra akaikin'i Madrid, anisan'izany ny seranam-piaramanidina, tanàna sy vondrom-paritra manerana ny Community of Madrid.
Hividy mikrôby ho an'ny famindrana fiantsonan'ny fiaramanidina Madrid?
Na izany na tsy izany, miantoka anay ny fiara madinika mora indrindra sy ny fanofanana mora indrindra, ao Madrid Adolfo Suarez Barajas Airport; Soa ihany fa mampitaha ny vidin'ny farany izahay, avy amin'ireo orinasam-pivarotana lehibe miaraka amin'ny mpamily ary maro hafa ho anao. Na ahoana na ahoana, mitadiava ny manaraka Rent of minivans na fampindramana kamiao amin'ny aterineto.
Amin'ny lafiny iray, ho an'ny Madrid transfer transfer, Azonao atao koa ny manoratra ny mpanjifa, amin'ny alalan'ny WhatsApp + 34 607372252, e-mail na telefaonina ho notsongaina, koa fampahalalana bebe kokoa Pricing mba hanampy anao hanao ny famandrihan-toerana ho an'ny mpandeha any Madrid minibus Airport .
Safidy iray hafa ny fiantohana Vans, combis ary minibus miaraka amin'ny mpamily any amin'ny seranam-piaramanidina Madrid
Noho izany, nanofa ny minivan na minibus dia tsara, rehefa mandeha miaraka amin'ny vondrona 6 / 7 na mihoatra: Noho izany, ny trano kely malalaka, configurations seza lava sy malefaka seza sy ny entana toerana fa ny entana dia lehibe kokoa, ka atero ianao sy ny mpandeha dia ny aina.
Raha mijery ianao manofa fiaramanidina kely na minivan in Madrid Barajas Airport, hojerentsika ny taha isan-kerinandro ny faran'ny herinandro sy ny fanofana 6 / 7 / 12 / 16 / 19 / 25 / 30 / 35 / 50 / 54 sy ny efamira ho 70, toy ny minivan Mercedes Class V for 7 olona, ​​Mercedes Sprinter iray minibus amin'ny fahaizana ho an'ny mpandeha 16 na 30 olona Mercedes minibus.
Mitady aho minibus rent ho an'ny famindrana fiantsonan'ny serivisy Madrid
Hihaona ny minibuses sy ny bisy misy amin'ny seranam-piaramanidina ao Madrid Barajas Adolfo Suarez sy ny Bokin'i ny tsy lafo toy ny seater tranofiara minibus solika 7 ny Mercedes Class V Minivan, azo antoka sy azo antoka 12 combi mpandeha.
Raha mila famolavolavola mini familiana lehibe ianao, dia mametraha famandrihana ho an'ny Mercedes Sprinter ary mametraka minibus ho an'ny olona 8, na sehatry ny seza 8 miaraka amina toerana malalaka ho an'ny valizy sy fametrahana seza.
Jereo ny momba anay vidin'ny, famindrana fianjerana Madrid, mba hanofa rivotra malemy, toy ny Mercedes Viano miaraka mandeha ho azy, 7 amin'ny seza ampy tsara ho an'ny mpandeha sy ny entany na minibus Mercedes Sprinter seza 19, mahomby noho ny famonjena euro, ho an'ny namany na ny fianakaviany miaraka amin'ny kanto townscape fiara fitateram-bahoaka.
Ianao mitady fanofana sur discounted seranam-piaramanidina famindrana an'i Madrid? Fantaro ny momba ny tolotra ny fanofana sy ny tranofiara minibus seza arovana 9 Airport Madrid amin'ny tsara indrindra eny anivon'ny tsena. Manofa minibus Mercedes Benz, mahery maotera, afaka mitondra mihoatra noho ny seza 9 ny valizy, na nandriatra ny Mercedes Vito 7 olona, ​​na ny rendrarendra sur Mercedes Class V for hatramin'ny 6 olona.
Manomana fitsangatsanganana ve ianao? Fantaro ny saran-dalan'ny serivisy vitsivitsy, miaraka amin'ny mpamily fiara fitaterana an-dalamby Madrid ary hamandrika fiara Mercedes Sprinter miaraka amin'ny seza 12 miaraka amin'ny mpamily fiara ao amin'ny seranam-piaramanidina Madrid handeha amin'ny fomba sy ny fahalalahana.
Fandefasana entana misimisy miaraka amin'ny mpamily, lehibe, fanampiny any amin'ny seranam-piaramanidina ao Madrid
Raha mila mitondra olona marobe amin'ny fampiasana manokana na ara-barotra ianao, dia jereo ny tolotra bisy ao amin'ny seranam-piaramanidina Madrid. Fidio ny sandan'ny habeny na van lefona amin'ny zavatra ilainareo, avy amin'ny saran-dalana fanananay, amin'ny seranam-piaramanidina Madrid. Ankafizo ny tsara indrindra vidiny rehefa microbus amin'ny boky iray ho an'ny mpamily 8, 12 sy 16 lafiny mpandeha sliding varavarana mpandeha seza na sur 12 aoriana-kodiarana fiara (RWD). Alaivo ny minibus ho an'ny mpandeha 15 sy 19 na tranokala Mercedes amin'ny seza 17, na jereo ny soso-kevitra ao amin'ny tranonkala
Manana isika Mpitolona miteny anglisy, miaraka amin'ny traikefa sy fahalalana momba ny fifindran'ny fiarahamonina ao Madrid. Ny tolotra ataonay dia mifototra amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa, ohatra:
Hi, mila mila aho Fiovana amin'ny seranam-piaramanidina Madrid BarajasIzahay ny vondrona mpianatra izay tonga avy tany Berlin, ny fiaramanidina tonga tany momba ny 11: 00, na izany aza, toy ny rehefa niantso an'i mangataka ny notsongaina, nilaza fa izahay facilitásemos ny sidina io isa no FR2528, tonga ny T4S alalan'ny terminal; Araka ny sidina dia tonga eo amin'ny 6 isika: 54 ny maraina eo anelanelan'ny zavatra sasany sy ny hafa handao ny Tafika amin'ny seranam-piaramanidina Madrid momba ny 7: 45, dia tokony hitondra antsika any amin'ny afovoan'i Madrid.
Autocares Torres Bus SL sy ny Rentrée microbus ho an'ny famindrana serivisy Madrid barajas
Miarahaba Azucena, aza manahy, ny varotra mpiasa no hikarakara ny teti-bola ny seranam-piaramanidina famindrana, koa dia maneho ny fotoana hanamarina antsika ny isan'ny toerana izay handeha amintsika avy any amin'ny seranam-piaramanidina ho any Madrid, dia mety hanamaivana ny vidiny nefa ianao mbola dingana vidiny ho an'ny kianja 16 sy efamira 20. Rehefa manamafy ny asa, azafady no angatahintsika, resend mailaka aho nanao hoe: manaiky ny teti-bola, na manome antsika a reply, ary indray mandeha nandray ny teti-bola iray andro mialoha ny asa fanompoana ny sampan-draharahan'ny fifamoivoizana dia haniraka ny SMS ny fahalalana mikasika ny mpamily ary mailaka miaraka amin'ny fampahalalana rehetra momba ny tolotrareo
Madrid dia tanàna lehibe indrindra, misy betsaka ny mahita ka manaova, raha hanofa fiara fitateram-bahoaka na minibus, sy ny safidy tsara indrindra dia ny orinasa #torresbus mpanazatra, fiara fitateram-bahoaka mba hitondra antsika amin'ny seranam-piaramanidina Madrid Barajas Adolfo Suarez , any afovoan-tanàna.
Afaka mahazo intsony ny fiara fitateram-bahoaka tao amin'ny Plaza de Cibeles teo am-pijerena ny iray amin'ireo trano tsara tarehy indrindra ao Madrid rehetra, ny Filan-kevitry ny Tanàna raha ny marina dia mijery toy ny lapan'i Reyes. Aiza no tokony halehako? Safidy tsara iray hafa dia ny manaraka Calle Alcalá ny malaza Puerta del Sol, akaikin'ny Plaza ben'ny tanàna, vao ho ao amin'ny hoe "fo", ny fon'ny Madrid. Tonga eto ny olona mba hiangona amin'ny namana, hotiavina, hipetraka amin'ny café, manana tapas, divay tsara ao an-toerana na labiera mamelombelona.
fangatahana na fanofana fiara madinika ho an'ny famindrana fiantsonan'ny seranam-piaramanidina Barajas Madrid
Ity toerana ity dia toerana tianao hahatongavana, raha te-hifikitra amin'ny fitiavana ianao. Ny hetsika dia eto, miaraka amin'ny #torresbus, dia mandeha foana ny mihazakazaka ny orinasan'ny bus sy minibus. Manoro hevitra aho mankany amin'ny lapan'ny Mpanjaka, ity trano ity raha tena lehibe sy tsara tarehy.
Io no Lapan'ny Mpanjaka indrindra manerana an'i Eoropa. Tsy mipetraka ao ny fianakavian'ny mpanjaka. Raha ny marina dia mihoatra ny biraon'ny 3.000, mahafinaritra ny mijery. Hitako ny sasantsasany amin'ireo sehatra manan-danja indrindra, fa tsy izy rehetra. Andao isika handroso Ary ity no Plaza de Oriente.
Ity no ivon'ny tanàna. Ny làlany manan-danja rehetra, miaraka amina toerana misimisy kokoa ny olona, ​​dia misy café, barotra ary olona avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Tokony handeha an-kilometatra zero ianao, ary apetraho ao anatiny ny tongotrao, dia ny foiben'i Espaina.
Tsy misy fomba tsara kokoa hitsidihana ny tanàna; miaraka amin'ny minibus na bus avy amin'ny orinasa mpitarika ny tsena #torresbus; mankafy ny fomba fijery tsara indrindra amin'ny tanànan'i Madrid. Fialam-boly, fiantohana, fampiononana ary fiantohana.
Fandefasana any amin'ny seranam-piaramanidina Barajas Madrid || Fandefasana fiara amin'ny serivisy minibus
Famindrana any amin'ny seranam-piaramanidina Madrid transfere transfere | fiaramanidina shuttle January 28th, 2019Fampiofanana mpampiofana